Global Voices teny Malagasy · admin – Novambra 2016
admin · Novambra, 2016
Lahatsoratra farany an'i admin tamin'ny Novambra, 2016
Amerika Avaratra23 Novambra 2016
Ho Tanterahan'i Pakistàna Ve Ny Fandrahonany Handroaka Afghana Mpitsoa-ponenana 2,5 tapitrisa ?
Afganistana22 Novambra 2016
Taorian'ny folo taona niaraha-niaina, milaza i Islamabad fa tsy afaka intsony hampiantrano ireo mpitsoa-ponenana avy amin'ny mpifanila vodirindrina aminy triarin'ny ady izy.
Fisintonana Vola Taratasy Ambony Sanda Niteraka Saritaka Tany India
Azia Atsimo18 Novambra 2016
"Eritrereto koa ny mpiasa an-trano, mpamily. Izy ireo koa dia mandray ny karamany amin'ny vola Rs 500. Antenaina fa manana fandaharanasa sosialy goavana ny Governemanta."
Raha mihinana tsimoramora ny rafitra fototra ara-politika sy ara-toekarenan'i Etiopia ireo hetsi-panoherana, hita ho mitsingilahila tsy nisy ohatra izany ny fitondràna.
Amerika Avaratra06 Novambra 2016
Mahita Fanitsakitsahana Zon'Olombelona Ao Anatin'ilay Volavolan-dalàna Hiarovana ny Ankizy Ireo Shinoa Mpisera Amin'ny Aterineto
Manandrana ny hiaro ireo ankizy ireo volavolan-dalàna vaovao, amin'ny fangatahana ireo orinasa mpanamboatra solosaina mba hametraka rindrambaiko fanarahamaso ao amin'ireo fitaovana, ary amin'ny fanindrahindrana ireo fitsaboana ny "fiankinandoha amin'ny Aterineto."